Kay: Waxaan ka walaacsanahay eedaha laaluushka - BBC Somali
Kay: Waxaan ka walaacsanahay eedaha laaluushka
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa sheegay in uu aad uga walaacsan yahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’iisal Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed.
Nicholas Kay, waxaa uu sheegay in khilaafkan uu khatar gelinayo dadaalka loogu jiro sidii loo gaari lahaa barnaamijka siyaasadeed ee la hiigsanyo 2016-ka, oo ay ku jirto in la qabto doorasho si xor iyo cadaalad ah u dhacda.
Ergeyga gaarka, waxaa sidoo kale uu sheegay in uu ka walaacsan yahay eedeymo sheegaya ''in qaar ka mid ah Xildhibaanada la weydiisanayo inay codkooda lacag siistaan''
Nicholas Kay, wuxuu ku celiyay baaqii uu dhowaan jeediyay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon oo ku baaqay in heerka ugu sareeya ee Dowladda Federaalka laga helo midnimo siyaasadeed.
Madaxweyne Xassan Sheekh, ayaa dhowaan ku gacan seeray isbeddelo kooban oo uu Ra'iisal wasaaraha ku sameeyey gollaha wasiirada.
Madaxweynaha wuxuuu sheegay in tilaabadaasi ahayd mid aan isaga lagala tashan islamarkaasna aan waafaqsanayn dastuurka.